NIVEA Myanmar and City Mart with the Contribution of Customers Donate K16 Million to Fight COVID-19 | Myanmar Business Today
HomeBusinessNIVEA Myanmar and City Mart with the Contribution of Customers Donate K16...
NIVEA Myanmar and City Mart with the Contribution of Customers Donate K16 Million to Fight COVID-19
NIVEA Myanmar together with City Mart Holding Co., Ltd. (CMHL) have donated K16.065 million to the Myanmar Red Cross Society as part of its CSR campaign carried out between July 15 and August 31.
Under the campaign, NIVEA and CMHL pledged to donate K100 for every NIVEA product purchased at City Mart, marketplace by City Mart, Ocean Supercenter, and City Express outlets within the campaign period.
In addition, NIVEA also encouraged its employees to take part in the inhouse campaign “Donate Once, Twice the Effect”, where it doubled the employees’ donations.
“We are thrilled by the support of our consumers and employees alike. This is notadonation solely by NIVEA and City Mart Holding Company, this is merit we made together with our patrons and our team. At NIVEA, every day we provide our consumers with the best quality skincare products, but our purpose is to Care Beyond Skin and with this initiative, we are living up to that. We promise to continue our efforts in supporting Myanmar people in this fight, and we hope we can inspire other companies to unite and contribute in helping to protect our country from the pandemic,” said Nikki Seelen, Marketing Manager of NIVEA Myanmar.
Myanmar, being one of the least developed countries, is employing all of its resources in the fight against the COVID-19 and the government has implored its citizens and businesses to contribute in the fight. As of the morning of September 28, Myanmar has 11,631 reported cases with 3.073 recovered patients and 256 deaths. Since mid-August, the number of COVID-19 cases in Myanmar is rapidly increasing and people consider it to be the second wave. The Ministry of Health and Sports has issuedastay-at-home order for all townships in Yangon Region except Coco island.
Like individuals, civil organizations, and companies are contributing to the fight against the pandemic, NIVEA Myanmar has also donated one thousand survival bags for first responders to the Myanmar Red Cross Society. Each set includes surgical masks, gloves,aface shield, NIVEA creme tin, NIVEA hand sanitizer, and NIVEA facial foam.
Since its arrival in Myanmar over 20 years ago, NIVEA has been championing corporate social responsibility by supporting access to education for underprivileged, and relief recovery partnering with various local and international organizations.
NIVEA Myanmar is part of Beiersdorf AG,aleading provider of innovative, high-quality skincare products with over 135 years of experience in the market segment. In Myanmar, NIVEA and Hansaplast, one of Beiersdorf AG’s brand’ are the No1. brands in their respective fields, the brands are being sold throughout the country and onadaily basis over 500 beauty advisors are educating Myanmar consumers about beauty and personal care.
COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် NIVEA Myanmar နှင့် City Mart တို့က ကျပ် ၁၆ သန်း လှူဒါန်း
NIVEA Myanmar City Mart Holding Co., Ltdနှင့် ပူးပေါင်းလျက် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ရပ်ရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် မြန်မာ့ ကြက်ခြေနီအသင်းထံ ကျပ် ၁၆ ဒသမ ၀၆၅ သန်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစီအစဥ်အရ NIVEA နှင့် City Mart Holding တို့သည် City Mart များ၊ City Mart က ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် marketplace ၊ Ocean Supercenter နှင့် City Express တို့တွင် ယင်းကာလအတွင်း NIVEA ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဝယ်ယူတိုင်း ကျပ် ၁၀၀ လှူဒါန်းသွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် NIVEA Myanmar ရှိ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ‘တစ်ကြိမ်လှူ နှစ်ဆပွား” အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ လှူဒါန်းမှုတိုင်းကို ကုမ္ပဏီက နှစ်ဆထည့်ဝင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
“အခုလိုမျိုး သုံးစွဲသူတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက ပံ့ပိုးကြတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့အရမ်းကို ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါက NIVEA နှင့် City Mart Holding Company ရဲ့ပါဝင်မှုတင်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်မတို့ သုံးစွဲသူဖောက်သည်တွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ နဲ့အတူတကွ ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လှူဒါန်းမှု ဖြစ်ပါတယ်။ NIVEA က နေ့စဉ်သုံးစွဲသူတွေကို အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးရှိတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ဖန်တီးပေးရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ Care Beyond Skin ဆိုတာ ကလည်း ကျွန်မတို့ရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအစီအစဉ်နဲ့အတူ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမယ်လို့လည်းကတိပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကနေ တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် ပါဝင်ကူညီကြဖို့နဲ့ တခြားကုမ္ပဏီတွေကိုလည်း အခုလိုစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ အတူတကွလုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိုလည်း ဒီလှုပ်ရှားမှုကတဆင့် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု NIVEA Myanmar ၏ Marketing Manager ဖြစ်သူ Nikki Seelen က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းပါးဆုံးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် COVID-19 ကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ရှိသမျှ အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်ယူသုံးစွဲနေပြီး နိုင်ငံသားများနှင့် ကုမ္ပဏီများကိုလည်း အဆိုပါ တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ စက်တင်လာလ ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသည့် လူနာပေါင်း ၁၁၆၃၁ ၁၅ ဦးရှိပြီး ယင်းအနက်မှာ ၃၀၇၃ ဦးက ပြန်လည်သက်သာလာပြီဖြစ်ကာ ၂၅၆ ဦး အသက်ဆုံးပါးသွားခဲ့ရသည်။ သြဂုတ်လလယ်မှစကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု တဟုန်ထိုး မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ဤကာလကို ဒုတိယလှိုင်းဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနကလည်း ကိုကိုးကျွန်းမှလွဲလျှင် ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ မြို့နယ်များအားလုံးရှိ ပြည်သူများ မိမိတို့၏ နေအိမ်တွင်သာ နေကြရန် Stay at Home အမိန့်ထုတ်ထားသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ပင် NIVEA Myanmar သည် ယခုကပ်ရောဂါဆိုးကို ရှေ့တန်းမှပါဝင် ကူညီပေးခဲ့သောသူများအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီးနောက် အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် (Survival kit) အိတ် ပေါင်း တစ်ထောင်ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းထံ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အိတ်တစ်အိတ်စီတွင် ခွဲစိတ်ခန်းသုံး နှာခေါင်းစည်းများ၊ လက်အိတ်များ၊ မျက်နှာအကာအကွယ်များ၊ NIVEA creme ဘူး၊ NIVEA လက်သန့်စင်ဆေးရည်နှင့် NIVEA မျက်နှာသစ်ဆေးတို့ပါဝင်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန်မှ စတင်ကာ NIVEA သည် နွမ်းပါးသူများအတွက် ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး၊ ဒေသတွင်းသာမက နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ကာ တာဝန်သိ တာဝန်ခံမှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။
NIVEA Myanmar ဆန်းသစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားသော skincare ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်နေပြီး ယင်းကဏ္ဍတွင် နှစ်ပေါင်း ၁၃၅ နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသည့် Beiersdorf AG ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် NIVEA နှင့် Beiersdorf AG ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သော Hansaplast တို့သည် ၎င်းတို့သက်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်နယ်ပယ်တွင် နံပါတ် ၁ နေရာရရှိထားသော အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ထုတ်ကုန်များကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် အလှအပဆိုင်ရာအကြံပေး ၅၀၀ ကျော်မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိသုံးစွဲသူများအား အလှအပ နှင့် တစ်ကိုယ်ရေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည်များကို နေ့စဉ်မျှဝေလျက်ရှိပါသည်။
Previous articleMyanmar Doing Well in Backing Country’s Economy During the Pandemic: State Counsellor
Next articleAgri product exports increased by $500 million